Lahatsoratra nataon'i Sean Gordon ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Sean Gordon
Ny taranaka mitarika no tompon'andraikitra lehibe amin'ny ekipa marketing. Izy ireo dia mifantoka amin'ny fitadiavana, fampidirana ary famadihana ireo mpihaino kendrena ho lasa prospect mety ho lasa mpanjifa. Zava-dehibe ho an'ny orinasa ny mamorona tetika marketing izay hampiroborobo ny taranaka mitarika. Manoloana izany dia mitady fomba vaovao hisongadinana hatrany ireo matihanina amin'ny marketing, indrindra amin'ny tontolo mazàna matetika. Ny ankamaroan'ny mpivarotra B2B dia mivadika mailaka ary mihevitra azy io ho fizarana mahomby indrindra